अस्पताल अगाडि ढलको आहाल
सम्पादकीय अस्पताल अगाडि ढलको आहाल वीर अस्पतालको ढोकै सामु जमेको ढलले अस्पताल प्रशासनदेखि देशकै शासनको अनुहार उदांगो बनाएको छ
बाह्रखरी - मंगलबार, मंसिर १६, २०७७
देशकै सबैभन्दा पुरानो र ठूलो अस्पतालका सामु महामारी फैलेका बेलामा पनि ढलको पानी कैयौं दिनसम्म जमेर बसेको छ । यसरी ढलको घीनलाग्दो पानी सडकमा जमेर बस्दा सर्वसाधारणसहित त्यस सडक र अस्पतालको प्रयोग गर्ने सबैलाई असुविधा भएको छ र तिनको स्वास्थ्यमा जोखिम पनि भएको छ । तर, न त ढलको व्यवस्थापन गर्ने र महसुल उठाउने काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडले यसमा ध्यान दिएको देखियो न काठमाडौं महानगरपालिका नै समस्या समाधान गर्न अग्रसर भएको पाइयो । अस्पतालकै आँगनमा ढलको पानी जम्दा त वीर अस्पताल प्रशासनले पनि सरकारलाई दबाब दिन सक्नुपर्थ्यो । दुर्भाग्य, राजधानीको मुटुमा ढलको आहाल जम्दा पनि देशको शासन संयन्त्र तमासा हेरेर बसेको छ ।
वीर अस्पतालको ढोकै सामु जमेको ढलले अस्पताल प्रशासनदेखि देशकै शासनको अनुहार उदांगो बनाएको छ भन्नु अत्युक्ति हुँदैन । काठमाडौं महानगरपालिकाले केही साता पहिला कोभिड—१९ को महामारीका कारण भोकै बस्न विवश नागरिकलाई खुला ठाउँमा खाना खुवाउन रोक लगाएको थियो । असहायलाई खुला ठाउँँमा खाना वितरण गर्न दिँदा सहरको सौन्दर्य र जनस्वास्थ्य जोखिममा पर्ने तर्क महानगरपालिकाका प्रमुखले दिएका थिए । सहरको सौन्दर्य र जनस्वास्थ्यप्रति साँच्चैको चिन्ता हुन्थ्यो भने त वीर अस्पतालबाहिर ढल जम्नेबित्तिकै काठमाडौं महानगरपालि र काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड समाधानका लागि अगाडि सर्नुपर्ने थियो । तर, जनतालाई परेको पीरमर्काको छु मतलब !
दुर्भाग्य, वीर अस्पतालबाहिर यसरी ढलको आहाल बन्दा पनि काठमाडौं महानगरपालिका, वीर अस्पताल प्रशासन र काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडका अधिकारीहरू भने एक अर्कालाई देखाएर आफू उम्कन खोज्दैछन् । त्यसो त त्यस क्षेत्रमा प्रहरीको गस्ती पनि बाक्लै हुन्छ । वीर अस्पतालबाहिर त्यसरी ढल फुटेर जमेपछि नेपाल प्रहरीले नै पनि सम्बन्धित निकायलाई समस्या समाधानका लागि जनाउ दिनसक्थ्यो । त्यसरी ढल जम्दा सहरको शोभन बिग्रनेमात्र हैन संक्रामक रोग पनि फैलने डर हुन्छ । यसैले यो सम्बन्धित वडादेखि संघीय सरकारसम्म सबैको सरोकारको विषय हो । यस्तो गम्भीर विषयमा यसरी हेलचेक्याइँ गर्नेहरूलाई उत्तरदायी बनाउने अम्यास शासनमा हुन्थ्यो भने सम्बन्धित अधिकारीहरू कारबाहीका भागीदार भइसक्थे । महामारी फैलेका बेला कोभिड—१९ संक्रमितहरू समेतको उपचार हुने अस्पतालको ढल मध्यसहरमा खुला छाड्नु गम्भीर अपराध नै हो । अतः संघ सरकारले तत्काल हस्तक्षेप गरी वीर अस्पतालको आँगनमा बनेको ढलको आहाल सुकाउने प्रबन्ध गरोस् । यस्तै बेथिति गरेर न शासनलाई धारे हात लगाउनेहरूले मौका पाएका हुन् !
मंगलबार, मंसिर १६, २०७७ मा प्रकाशित
सरकार र जनता दुवै यसरी गैरजिम्मेवार भइरहने हाे भने महामारीकाे कहर सहन तयार भए हुन्छ । २१ घण्टा पहिले